(Redirected from Mhina (museve))
Vatauri veLunyoro neLugungu vanoti buta (n. bow) kureva uta.
VaHerero neMang'anja vanoti uta (begin; found; invent; initiate; undertake; originate; commence anything).
VaHerero vanoti otyi-kuti-rirua (arrow point) vachireva munzi wepfumo.
Vatauri veChewa vanoti chikungo (the string of a bow).
Mururimi rweKikongo vanoti ewuta (a bearing, a bringing forth) kureva kubereka kana kuzvara.
VaKongo vanoti tota (arrow) kureva museve.
Mafwe vanoti mata (n. mata) vachireva uta pakuwanda.
VaDigo vanoti lubgwe (string, cord, bowstring) zvichireva kukumbira vabereki tambo yeuta.
VaLenje vanoti uruvuto (string of bow) vachireva tambo yeuta.
VaLozi vanoti -kunga (v.t. to gather, to col-lect, to muster) vachireva kukunga.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Uta_neMuseve&oldid=71870"
This page was last edited on 25 Kurume 2020, at 22:49.